Faahfaahino kasoo baxaya weerar khasaare geystay oo dhexmaray ciidamada Kenya iyo Al-shabaab | Somali Link Newspaper
Guriga Breaking News Faahfaahino kasoo baxaya weerar khasaare geystay oo dhexmaray ciidamada Kenya iyo Al-shabaab
Sabti, Juun, 12, 2021 (HOL) – Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar dhabo gal ah oo aay ciidamo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-shabaab ku qaadeen Kolanyo gaadiid ah oo aay wateen ciidamada Kenya oo ku socdaalayay deegaano ka tirsan degmada Mandhera ee gobolka waqooyi bari Kenya.
Weerarka ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa degmada Tagaabo iyo tuulada Kintoo waxaana halkaasi ku dhexmaray ciidamada Al-shabaab iyo kuwa Kenya dagaal xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana la sheegay inuu ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.
Saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya oo ka hadashay weerarka aay kusoo qaadeen Al-Shabaab ayaa warbaahinta u sheeegay iney iska difaaceen weerarka kaga yimid ciidamada Shabaab islamarkaana aay gaarsiyeen jab xoogan.
Al-shabaab ayaa dhankooda baraha bulshada aay ku leyihiin ee Internetka ku shaaciyay iney guulo ka gaareen weerarka aay ku qaadeen kolanyada ciidamada Kenya kuna dileen laba askari, islamarkaana aay kusoo furteen hub fara badan.
Dhaqdhaqaaqa Al-shabaab ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay weeraro gaadmo ah iyo kuwa toos ahba ka geysanayay gudaha dalka kenya waana werarkii labaad oo todobaadyo gudahood aay ka geystaan deegaano hoos yimaada magaalada Mandhere ee gobolka waqooyi bari Kenya.
Article horeFaahfaahino kasoo baxaya weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb
Article soo socdaDad kusoo dhaawacmay duqeymo diyaaradaha Kenya ka geysteen gobolka Gedo oo Muqdisho la keenay